“YOSEF HAMBA TOLA’ Afaan Oromoo Quotes” – Beekan Guluma Erena
“YOSEF HAMBA TOLA’ Afaan Oromoo Quotes”	Beekan Guluma Erena
Personal Category April 23, 2016April 23, 2016BEEKAN GULUMMAA IRRANAA
109SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
“Yosef Hamba Tola Quotes”
1. Afaan keenya yoo nu hidhaniyyuu fuulli keenya bareechee dubbata!
2. Madaan malaa hin qabne abidda cidii keessaati.
3. Dhaloonni dhiiga keessa daa’imee guddate alagaaf harka hin laatu!
4. Daboo fakkaatee kan dhiiga dhuguuf deemu hedduudha.
5. Yeroo hundaa gufataniif hin kufani, garuu yeroo tokko tokko gufatanii kuffisuun jira.
6. Dubbii dhama hin qabne walitti coruun hojii mootummaa wayyaaneeti.
7. Hantuuta Gombisaa midhaanii seente horfanii keessaa baasu, didnaan keessatti ajjeesu, kana ta’uu baannaan callaa sana nyaattee fixxee kan irraa hafemmoo udaan isheetiin makti!
8. Meeshaa diina roqomsiisu; kan sabni Oromoo mana isaatii fuudhee itti fayyadamu; kan biyyoota ollaatii hin kadhannee fi deemee liqaa hin fudhanne ijoollee isaati.
9. Gaafa gufuun daandii qabsoo irratti biqiluu jalqabdu waan ukkaamfamee ture akka bakkee ba’e nutti hima. Waanti mul’ate kun osoo mataa dhokfatee hafee dhukkuba gadhee ta’uu hin oolu.
10. Mala ittiin gufuu si dura jiru bira tartu hin qopheeffanne taanaan kufaatii hamaaf si saaxila!
11. Namni akka namaatti yaadu dhiiga namaatiin fuula dhiqatee nama gidduu hin adeemu.
12. Galtuun karaa dhaqaa beekti malee karaa gala hin beektu.
13. Rasaasi wayyaaneen ilmaan Oromoo irratti roobsite galagalee ishee irratti roobaa jira.
14. Namni biyya Itiyoophiyaa keessa jiraatu dungoo Gaanii (Hokkotee guddaa) keessa jiru natti fakkaata.
15. Mootummootiin abbaa irree kallattii fi al-kallattiin gochaa suukanneessaa ummata isaanii irratti raawwachuun buddeen isaanii fi kan qomoo isaanii furdifatanii jiraatu.
16. Mootummaan wayyaanee mootummaa dhiigaan jiraatuudha.
17. Lammiileen Itiyoophiyaa hunduu yeroo dhugaan arreeddee bool’a seentuu fi sobni immoo muka kortu sirriitti ilaalaa jiru.
18. Sobi mootummaa Itiyoophiyaa utuu midhaan nyaataa ta’ee, silaa lammiilee keenya miliyoona digdamaa ol nyaata hatattamaa barbaadaa jiran quubsee irra taruun biyyoota addunyaa kana irraa gogiinsaan miidhamaa jiran qaqqaba ture.
19. Kan addunyaan qorattee hin argine biyya Itiyoophiyaa keessatti bishaan rasaasa yookaan meeshaa waraanaa ta’ee argamuusaati.
20. Barri itti bishaan qulqulluu fi bilisummaa dheebotan dhuganii qabbaneeffatan Saba Oromoof ni dhufaa.
21. Bara mootummaa wayyaanee kana abjuun saba Oromoo hidhaa fi du’a taate.
22. Mootummaa wayyaaneetti ariitiin xumura hin goonu taanaan, dhumaatiin saba keenyaa akka itti fufu beekaa!
23. Bara qamaxxee fi qoreen mata dhokfattee naannoo keessa guutte kana jabeessaa of eeggadha
24. Dhaloonni taa’ee mugu dafee keessaa haa dammaqu, yookaan bakka ga’ee sirnaan haa rafu.
25. Dungoon Oromoo guyyaa guyyaatti bobaatee, baqxee, coccobdee Qubee Afaan Oromoof ifa guddaa taate.
26. Addunyaan kun buburreedha; tokkoof toltee tokkoof summii; kan miidhus kan miidhamus walumatti qabdee hammattee teessi.
27. Hojii boonsaan dantaa saba Oromoo ilaallatu gaafa hojjetamu wayyaanotaaf dhukkuba lafeeti.
28. Oromoon bu’aa mataa isaaf jedhee qabsoo saba Oromoo dura dhaabbatuu fi alagaatti firoomu akka nama kafana malee qullaa dhaabbatuuti.
29. Dhalooti qarame diina halkanii fi guyyaa boqonnaa dhorkee barbaadeessa!
30. Muka midhaankee irratti jige ati ofirraa hin kaastu taanaan ormi sirraa hin kaasu.
@Yooseef Hambaa Tolaa 2016
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa109SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← LAKKII NATTI HAHAFU
ILAALCHA QAJEELAA UUMMACHUU →